Dhizaina Tepi Yakateedzana Fekitori - China Duct Tepi Series Vagadziri, Vatengesi
Dheipi tepi, inonzi zvakare dhadha tepi, ndeye machira- kana scrim-yakadzoserwa yekumanikidza-inonamira tepi, inowanzo kuvezwa ne polyethylene. Kune akasiyana siyana ezvivakwa anoshandisa akasiyana backings uye zvinonamatira, uye izwi rekuti 'duct tepi' rinowanzo shandiswa kureva kune ese marudzi emhando dzakasiyana matepi matepi ezvakasiyana zvinangwa.
Mucheka tepi yakaputirwa neepamusoro-viscosity yerabha kana inopisa inonyungudutsa glue, ine yakasimba peeling simba, tensile simba, girisi kuramba, kukwegura kuramba, tembiricha kuramba, kudzivirira mvura, uye ngura kuramba. Iyo tepi inonamira-yakasimba ine kunamatira kwakakura.
Mucheka tepi inonyanyoshandiswa kusimbisa makatoni, kuruka kapeti, kusungira-rinorema, kuputira isina mvura, nezvimwe. Parizvino, inogara ichishandiswa muindasitiri yemotokari, indasitiri yemapepa, uye indasitiri yemagetsi. Inoshandiswa munzvimbo dzakaita semakombi emota, chassis, makabati, nezvimwe, uko matanho asina mvura ari nani. Nyore kufa-cheka kugadzira.
Dheipi tepi, inonzi zvakare dhadha tepi, ndeye machira- kana scrim-yakadzoserwa yekumanikidza-inonamira tepi, inowanzo kuvezwa ne polyethylene. Kune akasiyana siyana ezvivakwa anoshandisa akasiyana backings uye zvinonamatira, uye izwi rekuti 'duct tepi' rinowanzo shandiswa kureva kune ese marudzi emhando dzakasiyana matepi matepi ezvakasiyana zvinangwa. Dhizaipi tepi inowanzo kuvhiringidzwa negaffer tepi (iyo yakagadzirirwa kuve isingatarisi uye yakabviswa zvakachena, kusiyana netape tepi). Imwe misiyano ndeyekupisa-kusagadzikana foil (kwete machira) tepi tepi inobatsira pakuvhara kudziya uye kutonhora ducts, inogadzirwa nekuti yakajairwa duct tepi inokundikana nekukurumidza painoshandiswa pamidziyo yekupisa. Dhiraipi tepi inowanzo kuve yegrey grey, asi zvakare inowanikwa mune mamwe mavara uye kunyange akadhindwa magadzirirwo.
Munguva yeHondo Yenyika II, Revolite (panguva iyoyo rakakamurwa naJohnson & Johnson) akagadzira tepi yekunamatira yakagadzirwa kubva kune yerabha-based adhesive yakashandiswa kune yakasimba dhaidhi yekutsigirwa. Iyi tepi yakaramba mvura uye yaishandiswa sekunamatira tepi pane mamwe mabara enhau panguva iyoyo.
"Dhaidhi tepi" yakanyorwa muOxford English Dictionary seyakange ichishandiswa kubva muna 1899;